Menu Button တစ်ခုကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နည်း(၁) ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Menu Button တစ်ခုကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နည်း(၁)
12:16:00 pm Menu Button တစ်ခုကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နည်း(၁) No comments
ကျွန်တော်တို့ Blog တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာ Menu လေးတော့
လူတိုင်းတက်ချင်းကျပါတယ်။ ကျွန်တော်လည် စလုပ်စက ဆိုရင် အတော်လုပ်ချင်တာ
Menu ကို ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လုပ်ရင်က တွေ့ခဲ့တာလေးကို
1. ပထမ မိမိ Blog မှLayout မှာ Page elements ကို click လိုက်ပါ။
2. AddaGadget ကို click လိုက်ပါ။
3. HTML/Java Script ကို click လိုက်ပါ။
4. အောက်က ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ code တွေကို copy ယူပြီထည့်လိုက်ပါ။
5. အဲဒီမှာ ပြင်စရာ ပြောင်စရာကတော့ URL နေရာတွေမှာ
ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ချိတ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ Blog ဒါမှမဟုတ် web site
လိပ်စာကို ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Home ဒါမှမဟုတ် မှုလစာမျက်နှာလို့
6. <li><a href="URL of your Home page">Home</a></li>
ဒီစာကြောင်းကတော့ မိမိချိတ်ချင်တဲ့ Link အရေးအတွက်အလိုက် ထပ်တိုလိုရပါတယ်။
7. <li><a href="mailto: Your Email Address">Contact</a></li>
ဒီစာကြောင်းကတော့ ထပ်တိုလို့ရပေးမဲ့ မိမိဆီကို မေးလ်ပို့ပြီ မေးလို့ရအောင်
လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိဆီ မေးလာတဲ့ မေးလ်တွေကို ဖြေပေးမဲ့ အကောင့်လိပ်စာကို
ချိတ်သင့်ပါတယ် အောက်က ဥပမာများကိုကြည့်ပါ။
<li><a href="http://wunthozinko.blogspot.com/">Gmail နှင့် Gtalk
<li><a href=" http://www.neuber.com/">Computer အကြောင်း</a></li>
<li><a href=" URL of your About page">E-Books များ</a></li>
<li><a href="mailto: zinko740@gmail.com">မရှင်းတာရှိက